avril 2014 – filazantsaramada
« Dia hoy Jesosy taminy: Anaka, manan-kanina va hianareo? Dia namaly Azy hoe izy: Tsia. Ary hoy Izy taminy: alatsaho amin’ny sisiny ankavanan’ny sambokely ny haratonareo dia hahazo hianareo. Koa dia nalatsany izany, ka tsy zakany nakarina noho ny habetsahan’ny hazandrano. » Jaona 21:5-6 Rehefa tsy hitan’ny mason’ny mpianatra intsony Jesosy, na dia efa nomanin’ny Tompo fatratra […]
Publié parfilazantsaramada avril 28, 2014 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur TSY MIOVA OMALY SY ANIO ARY MANDRAKIZAY
« Fa ny fitiavan’i Kristy no manery anay, satria izao ho hevitray: maty ny Anankiray hamonjy ny olona rehetra, ka dia maty koa izy rehetra; » (2Kort 5:14) Vanimpotoana iray mampangirifiry ny fon’ny olona ny fisian’ny andro iray ahatsapàny fa voageja izy. Mafy aminy izany satria tsy vokatry ny fony loatra ary mety hitondràny fahoriana lalina aza. […]
Publié parfilazantsaramada avril 16, 2014 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur VOAGEJA MANODIDINA IZAHAY, NEFA TSY TERY…
Nampahafantatra ny sahan’asany teny amin’ny Grande Braderie ny FF Voalohany izao ny sampan’asa Feon’ny Filazantsara no nandray anjara amin’ny « La Grande braderie de Madagascar » izay azon’ny rehetra novangiana tao amin’ny Stand N°104 teny amin’ny lapan’ny kolontsaina sy fanatanjahantena Mahamasina. Hetsika izay nanomboka ny alarobia 02 aprily lasa teo izy io ary nifarana ny alahady 06 […]
Publié parfilazantsaramada avril 15, 2014 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Hetsika fampahafantarana
Manao ahoana ny saina tokony ananantsika?
« Aoka ho ao aminareo izao saina izao, izay tao amin’i Kristy Jesosy koa, Izay, na dia nanana ny endrik’Andriamanitra aza, dia tsy nataony ho zavatra hofikiriny mafy ny fitoviana amin’Andriamanitra, fa nofoanany ny tenany. » Filipiana 2:5-6-7a Nisy vehivavy iray, izay nanana menaka manitra tsara. Nalainy io menaka io dia nahosorany ny tongotry ny lehilahy iray, […]
Publié parfilazantsaramada avril 11, 2014 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Manao ahoana ny saina tokony ananantsika?
Akany Fifampandrosoana Ambodinisotry
Niverina nitohy ny fiaraha-miasa. Raha tsiahivina dia anisan’ny programan’asa iray izay iandraiketan’ny Feon’ny Filazantsara ny mikasika ny tanora. Ny Akany Fifampandrosoana Ambodinisotry dia tafiditra amin’izany ka ny fandefasana sarimihetsika arahana fifanankalozan-kevitra no endriky ny fiaraha-miasa. Noho ny fanatsaràna sy fanamboarana ny efitrano fampiasa amin’izany moa dia niato nandritry ny volana maro ny fiaraha-miasa. Misaotra an’Andriamanitra […]
Publié parfilazantsaramada avril 9, 2014 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Akany Fifampandrosoana Ambodinisotry
MANANA FITAHIANA IZAY AO AMIN’I JESOSY
« Voatahy samy vehivavy ianao, ary voatahy ny hateraky ny kibonao » (Lioka 1:42b) Miarahaba antsika rehetra amin’ny Anaran’ny Tompo, mbola afaka mifanerasera amin’ny alalan’ny teniny. Amin’izany dia hita fa manana fitahiana manokana mihoatra lavitra noho izay eritreretintsika isika. Tsy ho ao amintsika anefa izany raha tsy Ilay Andriamanitra be fitiavana manana amby ampy amin’izany no anankinantsika […]
Publié parfilazantsaramada avril 4, 2014 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur MANANA FITAHIANA IZAY AO AMIN’I JESOSY
FANDAHARANA AMIN’NY RADIO
« Henoy ny feony » Efa nambara teto ihany ny momba ny fandaharana « Henoy ny feony », mandeha amin’ny onjam-peo na radio, vokarin’ny Sampan’asa Feon’ny Filazantsara. Ny hitoriana ny filazantsara ho an’ny tanora no tanjona lehibe ao anatin’izany. Anisan’ny mampiavaka ny fandaharana ny famakafakana lohahevitra iray izay miova isam-bolana. Nisy rahateo ny fanadihadiana natao mba ahafantarana izay lohahevitra […]
Publié parfilazantsaramada avril 3, 2014 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur FANDAHARANA AMIN’NY RADIO